GX12 र GX30 के हो ?
GX12 र GX30 तपाईंको मोबाइल फोनको इन्टरनेटका लागि प्रिपेड सब्सक्रिप्सन सेवा हो । GX12 र GX30 क्रमश:7दिन र 30 दिनका लागि मान्य हुन्छन् । यो बन्डलको मजा लिन तपाईंको प्रिपेड लाइन अनिवार्य रुपमा एक्टिभ (सक्रिय) हुनैपर्छ । GX12 मा अनलिमिटेड डाटा र सबै नेटवर्कहरूमा अनलिमिटेड कल र नि:शुल्क 1GB हटस्पट सेवा छ । GX30 मा अनलिमिटेड डाटा र नि:शुल्क 3GB हटस्पट सेवा छ ।
तपाईंले आफ्नो अनलिमिटेड डाटा (3mbps) आफ्नो स्मार्टफोनमा सबै उपयोगका लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ (उदाहरणका लागि: वेब ब्राउजिङ, सोसल, भिडियो, Twitch जस्तो स्ट्रिमिङ र Joox, Spotify, Apple Music जस्ता म्युजिक स्ट्रिमिङ, इमेल र अरु धेरै कुराहरू) ।
GX12 मा मैले अनलिमिटेड कलहरू केका लागि प्रयोग गर्न सक्छु ?
तपाईंले आफ्नो अनलिमिटेड कलहरू सबै मोबाइल नेटवर्कमा सबै लोकल कलहरूका लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
के GX12 अनलिमिटेड कलहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगका लागि उपलब्ध छन् ?
छैन । सम्पूर्ण अनलिमिटेड कलहरू आन्तरिक प्रयोगका लागि मात्र उपलब्ध छन् । स्ट्याण्डर्ड IDD रेट तथा रोमिङ शुल्कहरू लागू हुन्छन् ।
कसले GX12/ GX30 एक्टिभेट गर्न सक्छन् ?
यो बन्डललाई U Broadband सेवाका सब्सक्राइबरहरू बाहेकका सबै U Mobile प्रिपेड प्रयोगकर्ताहरूले एक्टिभेट गर्न सक्छन् ।
कुन-कुन डिभाइसहरूमा मैले GX12/ GX30 डाटा प्लान प्रयोग गर्न सक्छु ?
GX12/ GX30 स्मार्टफोनमा प्रयोग गर्नका लागि मात्र डिजाइन गरिएको छ ।
के मलाई मोबाइल हटस्पटमार्फत मेरो अनलिमिटेड डाटा अन्य डिभाइसहरूसँग शेयर गर्न अनुमति छ ?
अनलिमिटेड डाटा तपाईंको स्मार्टफोनमा व्यक्तिगत प्रयोगका लागि हो । अन्य डिभाइसहरूसँग डाटा शेयर गर्नका लागि तपाईंलाई स्पिड सीमा नभएको अतिरिक्त नि:शुल्क मोबाइल हटस्पट दिइएको हुन्छ ।
GX12 का लागि 1 GB; र
GX30 का लागि3GB; र
मोबाइल हटस्पटबाट प्रयोग भएको डाटा यो छुट्टाइएको कोटाबाट घट्नेछ ।
मैले मेरो मोबाइल हटस्पट कोटा सकाएपछि के हुन्छ ?
तपाईंले 64kbps को घटाइएको स्पिडमा मोबाइल हटस्पटको प्रयोगलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ ।
मैले कसरी GX12/ GX30 एक्टिभेट गर्न सक्छु ?
चरण 1 - MyUMobile एप खोल्नुहोस्
चरण2- Add-Ons छनोट गर्नुहोस्
चरण3- GX12/ GX30 छनोट गर्नुहोस्
चरण 1 - *118*1# डायल गर्नुहोस्
चरण2- GX12/ GX30 सब्सक्रिप्सन कन्फर्म गर्नुहोस्
SMS मार्फत ON GX12 वा ON GX30 टाइप गरेर 28118 मा पठाउनुहोस् ।
GX12 र GX30 को सफल एक्टिभेसनका लागि तपाईंसँग क्रमश: RM12 र RM 30 को ब्यालेन्स छ भनेर सुनिश्चित गर्नुहोस् ।
यो प्लानको वैधता अवधि कति हुन्छ ? मैले सब्सक्रिप्सन र नवीकरण अवधिको हिसाब कसरी गर्ने ?
तपाईंको सेवा एक्टिभेट भएको मितिबाट सब्सक्रिप्सन सुरु हुन्छ र GX12 तथा GX30 का लागि त्यो क्रमश:7दिन र 30 दिनको अन्त्यमा स्वत: नवीकरण हुन्छ (तपाईंको प्रिपेड अकाउन्टमा रहेको न्यूनतम ब्यालेन्समा भर पर्छ)
के मैले GX12/ GX30 का लागि मेरो सब्सक्रिप्सन स्वत: नवीकरण हुन बाँकी छ भनेर SMS सूचना पाउँछु ?
पाउनुहुन्छ । तपाईंले तपाईंको स्वत: नवीकरण हुने दिनभन्दा2र 1 दिन पहिला SMS नोटिफिकेसनहरू पाउनुहुनेछ र त्यसपछि तपाईंको सब्सक्रिप्सन नवीकरण भइसकेपछि अर्को SMS प्राप्त गर्नुहुनेछ ।